Ummiselo wecandelo wohlwaya iinkampani zombane kwimarike yemasheya | Ezezimali
Ummiselo wecandelo wohlwaya iinkampani zombane kwimarike yemasheya
Elinye lamacandelo emarike yemasheya elinokuthi lifumane owona msebenzi mbi kulo msebenzi sisandula ukuwuqalisa ngumbane. Apho iinkampani ezinje nge-Endesa, iGesi yeNdalo, iIberdrola, iRed Eléctrica Española okanye iEnagás zimelwe. Zonke zibandakanyiwe kwisalathiso esikhethiweyo kwii-equities zesizwe, i Ibex 35. Ngobunzima obubaluleke kakhulu xa kuthelekiswa namanye amaxabiso alo mthombo wesalathiso yenye yezona zinto zibalulekileyo zokutshintshiselana ngesitokhwe kwimeko yaseYurophu. Ngevolumu ephezulu kakhulu yokufumana ikhontrakthi yonke imihla apho imisebenzi emininzi yokuthenga kunye nokuthengisa izabelo zinqamlezayo.
Kunyaka ophelileyo, icandelo lezombane belilelinye lawona asebenza kakuhle kukhetho lwaseSpain. Ngamaxabiso axabisa ngaphezu kwamanani amabini, njengakwiimeko ezithile ze-Endesa, iGesi yeNdalo kunye neIberdrola. Ngokudityaniswa kwazo zezinye zeenkampani ezidwelisiweyo ezisasaze ezona zabelo zilungileyo phakathi kwabanini zabelo. Ngenzuzo yoku umvuzo ongaphezulu kwe-5% enye yezona ziphezulu ze-Ibex 35. Nangona kulo nyaka izakubona utshintsho oluncinci kunikezelo.
Ngayiphi na imeko, kwaye njengoko abahlalutyi abaninzi bezezimali besitsho, amaxabiso ezabelo kwicandelo lombane ayabiza kancinci emva kokuphononongwa kwakhona kwiinyanga ezilishumi elinambini zokuthengisa. Kuyadinisa kwiimeko ezininzi amandla aphezulu ababonise kude kube lixesha elidlulileyo. Ukuya kwinqanaba lokuba ezinye zazo sele zingaphezulu kwazo, ngamaxabiso akhoyo kwiimarike ze-equity. Ngale meko, ayothusi into yokuba icandelo elihle labatyali mali abancinci nabaphakathi abalingwa ukuba bangene kwizikhundla zabo ngoku.
1 Umbane: izilungiso emehlweni
2 Yehla kumaxabiso ekujoliswe kuwo
3 Ummiselo wecandelo lombane
4 Zisebenza njengexabiso lokusabela
5 Isivuno esiphezulu sesahlulo
6 Izabelo ezingaphantsi ukusukela ngo-2021
Umbane: izilungiso emehlweni
Ngenxa yokuhlaziywa kolu didi lweenkampani, ngokuqinisekileyo kuya kubakho ukuncipha okukhulu kumaxabiso abo ukusukela ngoku. Apho uxinzelelo lokuthengisa lunokunyanzeliswa ngokulula kubathengi, njengoko kubonisiwe kwiiseshoni zokuqala zorhwebo zalo nyaka mtsha. Nangona ngoku eyona nto ibalulekileyo iya kuba kukuqinisekisa ukuba ngawaphi amanqanaba anakho ukuthoba izikhundla zabo kwiimarike zezemali. Emva kokuxabiseka kweli candelo lombane kuzo zonke iimeko kucacile, kwaye kukhuthazwa ngakumbi, kukhuthazwa ngakumbi kunyaka wokuthengisa odlulileyo.
Kwelinye icala, ayinakulityalwa ukuba indawo elungileyo yolu khuseleko ithengisa ngokutyeba okucacileyo kumaxabiso abo. Le nto yokusebenza kuthetha ukuba ukusukela ngoku abanakukhetha ngaphandle kokuhla, ukuhla nokuqhubeka nokuhla. Ngaphandle kokuba kukho imeko ekhethekileyo kakhulu kwiimarike ze-equity. Ayisiyiyo kuphela kwi kwiimarike zesizwe, kodwa nakwabo bavela kwimida yethu. Ngaphaya kokunye ukuqwalaselwa kobuchwephesha kwaye kwanakwindawo yokujonga esisiseko.
Yehla kumaxabiso ekujoliswe kuwo
Enye into echaphazela ukusikwa ngamaxabiso ombane ngokungathandabuzekiyo kukuhla kohlaziyo olwenziwe ziiarhente eziphambili zezemali. Into engenandawo iya kuchaphazela la maxabiso sijongana nawo kweli nqaku kwaye abhekisa kwicandelo lombane elibalulekileyo kuzwelonke. Ke ngoko, ubulumko kunye nolumkiso kufuneka ibe yenye yezona zinto ziqhelekileyo kwizenzo ngabatyali mali abancinci nabaphakathi. Into etsala phantsi umthetho wonikezelo kunye nemfuno kwezi nkampani zihlalutyiweyo.
Kwelinye icala, enye into eya kuthi ngokuqinisekileyo ivavanywe ukusukela ngoku ukuya phambili kukuba indlela abanayo phambili kulo nyaka, ukuba ikho, incinci kakhulu. Ukuza kuthi ga kwinqanaba lokuba abatyali mali kwizabelo zeSpain banokulahlekelwa ngaphezulu kunokuhlawula Ngelixa elinye icandelo, ikwabalulekile ukuba
Ummiselo wecandelo lombane
Ewe, lelinye lamajelo olwazi ekufuneka uwuthathile ingqalelo kula maxesha achanekileyo kukuba isigqeba sikazwelonke sicinga ngokunika ummiselo omtsha kwinkonzo yombane ngenjongo yehlisa iirhafu yale nzuzo yasekhaya. Kuyo nayiphi na imeko, abahlalutyi bezezimali boyika ukuba eli nyathelo aliyi kufunyanwa kakuhle ngoonogada becandelo abanokuhlengahlengisa amaxabiso abo kwaye ngalo ndlela behle kulo nyaka mtsha wokurhweba. Ngokukodwa, unikwe utshintsho olulawulayo apho izinto eziguquguqukayo ezintsha zithathelwa ingqalelo ngokuqinisekileyo ezingazincedisi ezi nkampani zidwelisiweyo.
Ngale ndlela, imbonakalo yeenkampani zombane ayithembisi kakhulu kwiinyanga ezizayo. Ngokucutha okunobungozi kwicandelo elinokubangela ukuba izabelo zabo ziphulukane neepesenti ezili-10 okanye nangaphezulu kunexabiso langoku. Le meko, ewe, iyabonakala kwixesha elifutshane. Enye into eyahluke mpela yinto enokwenzeka kwixesha eliphakathi nelide apho amathemba okukhula azinzile, ngakumbi kwezo nkampani zikweli candelo zikwinqanaba eliphantsi lamatyala.
Zisebenza njengexabiso lokusabela
Kananjalo akufuneki ulibale kula maxesha ukuba, njengenqaku elincomekayo, eli klasi lamaxabiso ngokwesiko lidlala indima amaxabiso okusabela ngamaxesha okungazinzi okukhulu kwiimarike zezabelo. Ewe, ukuba oku bekuyimeko eboniswe yimarike yestokhwe kwi2019, inokuba ekugqibeleni inguquko yayo ayizukubi kwaphela, njengoko kubonisiwe ngabahlalutyi abaninzi bezezimali. Ngesizathu esilula njengokuba la maxabiso enentsebenzo engcono kunamanye kula maxesha okwehla kwimarike yemasheya.
Ngexesha lokugqibela lonyaka ophelileyo, uya kuba nakho ukubona ukuba kwakuqheleke kangakanani ukuba xa isalathiso esikhethiweyo semarike yestokhwe saseSpain siwe, la maxabiso ombane anyuka ngokuqikelela kwawo ngokwahlukeneyo. Kwiintshukumo zilingana ngokupheleleyo kubunzulu bonyuko okanye lokuhla. Akumangalisi ukuba baye kancinane ukuya ngokuchasene yangoku zeziphi ii-indices eziphambili ezityikitywe. Ngaphezulu kokuthathelwa ingqalelo kobuchwephesha kwaye mhlawumbi nakwindawo yokujonga esisiseko. Njengolunye lweempawu zalo zesazisi, ezaziwa kakhulu ngabatyali mali abancinci nabaphakathi.
Isivuno esiphezulu sesahlulo
Olunye uphawu lwento ebizwa ngokuba kukukhuseleka kwecandelo lombane kukuba banikezela ngesahlulo esiphezulu kakhulu kubanini zabelo kwaye ngaphezulu koko kuveliswe ngamanye amacandelo ezabelo zaseSpain. Ngomdla oscillates kwimfoloko ukusuka kwi-4% ukuya kwi-7% yeyona inikezelwa ngoku yinkampani ye-Endesa. Nangona kunjalo, ezinye iindaba ezimbi kubatyali mali abancinci nabaphakathi kulo nyaka kukuba izabelo ziya kuncitshiswa ngenxa yezicwangciso eziqeshwe ziinkampani. Le nto ibalulekileyo inokuthintela ukungena kwabatyali mali abatsha kwiinkampani.
Omnye wale mizekelo wenziwe yinkampani ye-Endesa, eyabhengeza kwiinyanga ezimbalwa ezidlulileyo Uya kwabela kuphela iipesenti ezingama-80 zenzuzo yakho kulo mvuzo wabanini zabelo. Kuze kube ngoku bekukho konke, oko kukuthi, i-100%. Oku ngokungathandabuzekiyo kungalulinganisa ubunzima balo kulo nyaka kwaye kuyaqapheleka ukuba iyakubonisa le milinganiselo kumgangatho omkhulu okanye omncinci kwaye kuxhomekeke kwezinye izinto eziguquguqukayo ezibonakala kwiimarike zezemali. Kubukhulu obufanayo nezinye iinkampani kwicandelo elifana neRed Eléctrica.
Izabelo ezingaphantsi ukusukela ngo-2021
U-Endesa ubhengeze umgaqo-nkqubo wesahlulo senkampani ukusukela nge-2021 yokuqinisa umgaqo-nkqubo wayo wokukhula kunye nokusebenzisa amathuba avulwe yinkampani. Utshintsho lwamandla kwinkampani. Inkampani yamandla ibhengeze eMilan ukuncitshiswa kwentlawulo-inxenye yenzuzo yonyaka ehanjiswa phakathi kwabanini zabelo-ukusuka kwi-100% yangoku ukuya kwi-80% kwi-2021, nangona izakuhambisa yonke inzuzo yayo kule minyaka mibini izayo. kunye nezigidi ezingama-5.900 kwiminyaka emine ezayo.
Inkampani ehamba phambili yombane waseSpain ngenani labathengi iya kuthi ke ihlengahlengise umgaqo-nkqubo wayo wokwahlulahlula kwiirekhodi zeenkampani ezinokuthelekiswa ezinje Iberdrola okanye Naturgy, kunye 'nokuhlawula' kufutshane nama-70% ngo-2017. Izabelo zenkampani zithengisa ngokuhla okungaphezulu kwe-2% xa kuthelekiswa noLwesibini. "Ndimele ndigxininise ukuba umgaqo-nkqubo wezahlulo ze-Endesa uyaqhubeka nokuba ngowona unomdla kweli candelo," utshilo umphathi wayo, uJosé Bogas, kwintlanganiso nabahlalutyi.
U-Endesa ulindele ukuba inzuzo yakhe ikhule nge-7% kwi-avareji yonyaka kwisithuba se-2018-2021, efikelela kwi-1.800 yezigidi zeerandi kunyaka ophelileyo, ngokokuhlaziywa kwesicwangciso sayo. Nangona kunjalo, ngo-2021 iceba ukunciphisa isibonelelo esenzelwe isabelo esivela kwi-100% ukuya kwi-80%, ngokolwazi oluthunyelwe kwiKhomishini yeSizwe yoKhuseleko kwiMarike (CNMV). Inkampani yamandla igwebela umgaqo-nkqubo omtsha ngenkxaso engaphezulu "kwiprofayili entsha yokukhula kwenkampani".
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » Iimveliso zezemali » Ummiselo wecandelo wohlwaya iinkampani zombane kwimarike yemasheya
Usuku luxabisa ngaphezulu kwe-60%
Isiqingatha sokuqala sonyaka sonyusa kwimarike yemasheya